WARBIXIN: Maxay tahay sababta uu goolhaye Petr Čech mar walba ugu ciyaari jiray Koofi? – Gool FM
(London) 02 Luulyo 2019. Petr Čech isagu wa mid ka mid ah goolhayeyaashii ugu wanaagsanaa ee abid soo kubadda cagta caalamka.
Haddii uusan wadan lahayn Koofida malaha Chelsea kuma guuleysateen tartanka Uefa Champions League sanadkii 2012-kii.
Isagu waa goolhayihii hore ee kooxda Chelsea, kan xilli ciyareedkii dhammaaday ka fariistay kubadda cagta, isagoo ka tirsanaa Arsenal ee Petr Čech.
Haddaba miyaad ogtahay sababta uu Petr Koofida ugu ciyaari jiray marwalba goormee ayeyse soo bilaabatay xirashadiisa koofida?.
Taageerayaasha kubadda cagta ayaa badankood arkay goolhaye Petr Čech oo xiran koofida ama Gaalfiska Madaxa badbaada u ah, waxaana uu mararka qaar noqdaa xiddig aan la garaneynin, waase marka aanu wadan koofida, balse dad yar oo kaliya ayaa garanaya sida ay Koofidan u badbaadiso nolasha goolhyae Petr Čech marka uu garoonka ku dhex jiro.
Taasi waa ka i laalinta goolhayahan halyeeyga ah halista kaga imaan karta ciyaarta, haddii uusan koofida ku ciyaarinna waxaa mar walba imaan karta halis weyn, waxaana ay qisadan bilowgeeda ku labanaysaa 13-sano ka hor.
Warbixintan oo aad u dheer laguna faafaahinayo sababta uu mar waliba goolhaye Petr Čech ugu ciyaari jiray koofida iyo waxa ay salka ku hayso waxaa inoo diyaariyey Wariyeheennada Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho ee ka daawo muuqaalka hoose.